? ကော့ကရိတ်၊ မြို့ဟောင်းရွာအနီးတွင် စစ်ကောင်စီနှင့် KNLA တို့ တိုက်ပွဲ ၂ ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီး စစ်ကောင်စီတပ်မှ ၉ ဦးသေဆုံး၊ ၁၀ ဦး ဒဏ်ရာရ - Voice Of Burma
? ကော့ကရိတ်၊ မြို့ဟောင်းရွာအနီးတွင် စစ်ကောင်စီနှင့် KNLA တို့ တိုက်ပွဲ ၂ ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီး စစ်ကောင်စီတပ်မှ ၉ ဦးသေဆုံး၊ ၁၀ ဦး ဒဏ်ရာရ
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ ၆ စစ်ရေးလှုပ်ရှားရာ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ မြို့ဟောင်းရွာအနီးတွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တို့ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နှင့် ၁၈ ရက်တွင် တိုက်ပွဲ ၂ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်မှ ၉ ဦး သေဆုံးကာ ၁၀ ဦး ဒဏ်ရာရကြောင်း KNU မှ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက် နံနက် ၈ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် စကခ ၁၃ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းမှူးနိုင်နိုင်လွင် ဦးဆောင်သော ခမရ ၅၅၆ နှင့် ခမရ ၅၆၀ တို့မှ စစ်သည်အင်အား ၁၄၀ ခန့်နှင့် KNLA တပ်မဟာ ၆၊ တပ်ရင်း ၂၇၊ တပ်ရင်း ၁၈ တပ်ဖွဲ့ဝင်များကြား ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ မြို့ဟောင်းကျေးရွာအနီးတွင် မိနစ် ၃၀ ခန့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်မှ ၄ ဦး သေဆုံး ၄ ဦး ဒဏ်ရာရကြောင်း သိရသည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်တွင် တပ်ရင်းမှူးနိုင်နိုင်လွင် ဦးဆောင်သော ခမရ ၅၅၆ နှင့် ခမရ ၅၆၀ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် မြို့ဟောင်းကျေးရွာမှ ရွာသစ်ကျေးရွာဘက်သို့ စစ်ရေးလှုပ်ရှားလာစဉ် KNLA တပ်မဟာ ၆၊ တပ်ရင်း ၂၇၊ တပ်ရင်း ၁၈ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ထပ်မံ ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ တိုက်ပွဲမှာ မိနစ် ၄၀ ခန့် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး စစကောင်စီတပ်မှ ၅ ဦး သေဆုံးကာ ၆ ဦး ဒဏ်ရာရကြောင်း KNU ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ခမရ ၅၅၆ မှ တပ်ရင်းမှူးနိုင်နိုင်လွင်သည် မောင်းမရွာသစ်ရှိ ဒေသခံပိုင်ဆိုင်သော ဈေးဆိုင် ၁ ဆိုင်အား မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းလည်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
?ယနေ့နေ့လည် ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင် Urban Asia မှ ကမ္ဘောဇဘဏ် ဓါးပြတိုက်ခံရ ❗ update – 20 min ago
? မင်းတပ်မြို့ပေါ်ရှိ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား CDF – မင်းတပ်မှ ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်၊ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂ ဦး သေဆုံး ၄ ဦး ဒဏ်ရာရ